« Hors les murs »: hetsika goavana hanehoana ny mozika ankehitriny | NewsMada
« Hors les murs »: hetsika goavana hanehoana ny mozika ankehitriny
« Hors les murs », fetin’ny mozika ankehitriny. Sambany, nifanome tanana ny toerana telo, fantatra amin’ny fanohanana sy ny fampiroboroboana ireo tanora malagasy manan-talenta ka hampanakaiky kokoa ny mpankafy mozika amin’ireo tarika fanta-daza amin’ity sehatra ity. « Hors les murs » ny anaran’ny hetsika, hotanterahina ny asabotsy izao, etsy amin’ny The Station Soarano, hitohy eny amin’ny Kudéta Anosy.
Ny tsara indrindra, eo amin’ny famoronana sy amin’ny traikefa efa ananana, no hatolotry ny Institut français de Madagascar (IFM) sy ny Kudéta Urban Club ary ny Label Libertalia. Na samy ao anatin’ny fironana misy ankehitriny, eo amin’ny tontolon’ny mozika aza, ny hiaka-tsehatra, ho maroloko ny gadona hifandimby, amin’io fampisehoana io.
Haharitra ora enina ny hetsika, handraisan’ny tarika enina anjara: mpiangaly rock, mpilalao mozika elektronika, havanana amin’ny RnB, ny manan-talenta amin’ny « soul ». Tsy iza akory izy ireo fa ry Mashmanjaka, ry Tsimihole, ry Atsi-Mözika, ry El3ktradam, ry Loharano, ry Bradih ary ry Kristel.
Ny The Station na ny Café de la Gare teo aloha no handray ny seho voalohany, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Satria « Hors les murs », sehatra lehibe ny hatsangana eo amin’ny bozaka malalaka, ao amin’ity toerana ity. Hitohy amin’ny « after », ao amin’ny Kudéta Anosy izany, ny alina. Tsy fahita firy ny seho goavana natao ho an’ireo milona ao anatin’ny mozika ankehitriny, eto amintsika. Heverina fa hanome fahafaham-po ireo mpankafy izany sy, indrindra, ireo mpanakanto, ity hetsika ity.